Ubomi obungathandekiyo ka-Anna Sedokova
Abantu abaninzi bayayithanda kwaye bayayixabisa umsebenzi ka-Anna Sedokova, owayengumdlali wecandelo elixhomekeke kwiRashiya, i-VIA GRA. Ngaphezu koko, uAnyu akayithandi kuphela imisebenzi yakhe yokudala, ubufazi kunye nobuhle bangaphandle, kodwa nangomntu onobubele nobumnene. Kwaye namhlanje siya kukuxelela ngobomi bakhe obubunzima kodwa obumnandi kakhulu.
U-Anna Vladimirovna wazalwa ngo-Disemba 16 ngo-1982 kwisixeko saseKiev. Kwaye nawuphi na umntu akude kube yimfihlelo yokuba ngo-2002 u-Anya wayengumdlali wecandelo lezesondo lelizwe lethu "VIA GRA", kodwa ngaphandle komsebenzi womculi, u-Anna wenza izinto kwiifilimu nakwiiprojekthi zeTV ezihlukeneyo.
Abazali baka-Ani baphoqeleka ukuba bathuthele eKie ukusuka kwisixeko esikude saseTomsk. Isizathu sokuhamba sasisobudlelwane obubi phakathi kwabazali ba-Annye nabazali babo (kuvela, kunye nootatomkhulu). Ngomnye wodliwano-ndlebe no-Anna Vladimirovna bathi: "Abazali bakaMama, utata-umfoto-mkhulu, ugogo-nkulu, u-radiologist, wayehlala, kunokuthiwa, mncinane. Kwaye upapa, ngokuphambene nentsapho, wayenotyebi kakhulu. Ugogo nomkhulu kumgca kayise-uprofesa. Abachasene ngokucacileyo umtshato wonyana wakhe ozayo. Emva koko ubaba nomama banquma ukubalekela ekupheleni komhlaba, eKiev. "
Xa uAna eneminyaka emihlanu ubudala, uVladimir Sedokov washiya uSvetlana Sedokova (unina kaNunuta) waza wamthabatha intombazana, kodwa emva kwexesha elifutshane uAanya wabuyiselwa eSvetlana. Kwaye emva kwayo yonke into ayenayo, u-Anna akazange avande ngoyise aze eneminyaka engama-25 ubudala. Xa wayeneminyaka engama-25 ubudala, u-Anya wakhulelwa njengomntwana wokuqala, kwaye uyise wayibhala nge-imeyile, apho anqume ukuba angaphenduli. Kamva, wafunda iindaba ezibuhlungu ukuba uyise wafa. Kodwa nangemva kokufa kukaVladimir uAna ucinga ukuba i-imeyli yinto encinci ongayenza xa ufuna ukudibanisa nomntu okanye ukubuyisela ubuhlobo bomntu.
Ngo-2000, u-Anya wadlulisa ukukhangela kwiqela legolide "VIA GRA", apho aphumelele khona impumelelo enkulu kunye noNadezhda Granovskaya noVera Brezhneva. Ukuthatha inxaxheba kwi-VIA GRE kwanikela u-Ana ukuthandwa kakhulu phakathi kwabantu bonke, ukusuka kubaphulaphuli abaselula kunabo bonke abaqolileyo. Kodwa emva kweminyaka emine emva kwempumelelo enkulu, u-Anna waphonsa iVIA GRU waza watshata. Igama lomyeni wam ngu-Valentin Belkevich (ibhola), kwaye kulo mtshato wazala umntwana wakhe wokuqala, u-Alina omncinane. Emva kwexesha elifutshane, uSedokova wagqiba ekubeni abuyele esiteji aze aqhube umsebenzi wokuzimela. Apha, ukuxhamla ngokutsha ekuthandeni nasekuphumeleleni kwaqala. U-Anya wamenywa ukuba atyhuphe kumaphephancwadi ahlukahlukeneyo, amenywe ukuba abe yinkqubo ekhokelayo, imithendeleko, uAna wafumana amabhaso, asayinwe izivumelwano, eneenkwenkwezi kwiifilimu, wakwazi ukurekhoda iingoma aze adulele izicwangciso - zonke ngexesha lokukhulelwa nangemva! Ungakhohlwa ukuba kuyimfuneko ukunceda abantu nokuzisa okuhle kweli hlabathi, uAna wayenomdla. Ngo-2010, u-Anna wagqiba incwadi enomdla kakhulu, ebizwa ngokuba ngu "Art Art seduction," echaza indlela yokuziphatha kakuhle ngobudlelwane nomntu, ukuba ungamkhathazi kwaye uhlale unomdla kuye.
Ubomi buka-Ani abuzange busebenze, kwaye kungekudala umtshato wokuqala waqhekeka. Mhlawumbi umyeni wam akakwazi ukuma ukuhamba rhoqo kunye neempumelelo zikaAni, mhlawumbi uya kumxhasa aze avuyiswe ngaye. Kamva kamva, iminyaka emihlanu emva komtshato, uAna watshata kwakhona. Umyeni wesibini we-Ani wayebizwa ngokuba nguMaxim Chernyavsky (ushishini). Ngomtshato wesibini, uSedokova wazala intombi yakhe yesibini, lowo yena noMaxim babiza uMonika. Esi sibini esitshatileyo sasihlala eMelika, apho uAna wazama ukuthatha inxaxheba kwiindawo ezahlukahlukeneyo zokwakha kunye nokwakha umsebenzi. Kodwa iRashiya iyakuthanda kakhulu u-Anya, ubuchule bakhe kunye nomculi wamenywa kwiziganeko ezahlukahlukeneyo - iikonsathi, ukuphonononga iimagazini, ukutshulwa kwefilimu, ukufumanisa nokunye njalo. Ngokuka-Ani, uMaxim wabelane ngabantwana "nentombi yomnye" (u-Alinochka kumtshato wakhe wokuqala) kunye "nentombi yakhe" (kuyacaca ukuba ufana nentombi kaSedvava), waba nomona kakhulu ngo-Anna, ubuhlobo babo buba nzima. U-Anna waze wenza iingoma ezininzi ezazinikezelwa kumyeni wakhe (njenge "Udali", "Into endiyenzayo" kunye nabanye), kunye nakwezinye iikontshi ze-Muz TV, ngexesha lokusebenza kwengoma ethi "Udali", ezinikele kwiimvakalelo ezinzima, uSedokova wada wakhala : "Xa ndimthanda nje ukuphazamisa, kodwa andinakube sisawonye." Ekuqaleni kuka-2013, u-Anna Sedokova watshatyalaliswa kuMaxim.
Biography ka-Anna Herman
I-Biography yomlawuli we-Andrei Tarkovsky
Uthandwa "ubaba" noAndrew Leonov
Keanu Reeves: idayoni ngaphakathi
UKsenia Simonova: Inqaku elifutshane
Indlela yokunxibelelana nomfana ukuba akushiye?
I-Biography yomdlali we-actress uValentina Talyzina
Iiklabishi ezisebenzisayo zincinci
Ngubani uMaria Gaidar?
Umkhankaso wokupapasha kweenkonzo zokuthengisa ithikithi
Indlela yokubeka umntu ukulala?
Ukumkhenkceza nge-Snow ngaphandle kokuya kumvezinyo wamazinyo
Indlela yokufundisa umntwana ukuba azimele
Amaqhinga ebhinqa ukukholisa indoda
Ukulala ukulala okanye umsebenzi ophuphayo ngawo
Intlanzi ebhakiweyo kwisitala saseMexico
Uhlobo lwakho lomfanekiso kunye nomdaniso oza kukunceda ulahlekelwe isisindo
Dorado e Provence
UFilip Kirkorov wavuma ukuba wayekulungele ukufumana umntwana